साउदी अरेबियाबाट फर्केका मगरको हातमा ह’त्कडी - समृद्ध नेपाल
काठमाडौं / इन्टरपोलबाट रेड कर्नर नोटिस जारी भएका फरार अभियुक्त उदयपुर बेलका नगरपालिका–६ का गोविन्द मगरलाई साउदी अरेबियाबाट १७ वर्षपछि प,क्राउ गरी नेपाल ल्याइएको छ । कर्तव्य ज्या,न मुद्दामा फरार रहेका मगर साउदी अरेबियामा प,क्राउ परेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय इन्टरपोल शाखाबाट खटिई गएको प्रहरी टोलीले नेपाल ल्याएको हो ।
अभियुक्त मगर २०६१ साल मंसिर १३ गते मानबहादुर तामाङलाई ह त्या गरेपछि फ रार रहेका थिए । उनी छद्म भेषमा साउदी पुगेको पत्ता लागेपछि इन्टरपोलको सहयोगमा प क्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय इन्टरपोल शाखाका अनुसार मगरलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुर ठोक्सिला उदयपुरलाई बुझाइएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुर ठोक्सिलाको अनुरोधमा इन्टरपोल शाखामार्फत इन्टरपोल महासचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोजतलास एवं प क्राउका लागि २०७७ साल माघ २६ गते अभियुक्त मगरविरु,द्ध रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको थियो । उक्त घटनामा संलग्न रहेका अर्का जयवीर राई भने अझै फरा,र छन् । प्रहरीले उनको खोजीलाई तीव्र बनाएको दाबी गरेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
चिसो हावाको चुनौती सहँदै न्यूयोर्कमा दशौं हजार महिलाको प्रदर्शन !
म सङ टिकटक बनाउने केटा साथी चाहियो सम्पर्क नम्नर सहित !
आजको सिन्धुपाल्चोक दुर्घटनामा बाँच्न सफल यी नानीको आफन्त भेट्टाउन शक्दो शेयर गरौँ !
अब ईपीएस सीप परीक्षणमा मात्र सामेल गराउनुपर्ने ईपीएस पास भएकाहरुको माग !
आधा घण्टा आकाशमा किन होल्ड गरियो प्रधानमन्त्रीलाई ? छानविन गर्न बन्यो समिति !
कलेज पढ्ने केटीहरु कल गर्लको रुपमा काम गर्दै सम्पार्क नम्बर सहित !
मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी २० वर्षिय सन्तोष को अकालमै ज्यान् गयो !
लोग्ने बिदेसमा दुख गर्ने बुडी नेपालमा मस्ती गर्नेलाई दिइन यी चेलीले कडा चेतावनी !भिडियो सहित
कक्षा ८ मा पढ्दा-पढ्दै किड्नि फेल भएका सन्तोश देउजाको सबैलाइ रुवाउने कथा उनकै मुखबाट !
रबिकि बहिनीले खोलिन रञ्जनाको वास्तविकता, (भिडियो सहित)
म संग बिहे गर्ने केटा चाहियो ! इछुक्ले सम्पर्क गर्नु होला !
आगलागीले घर खरानी बनेपछि थापा परिवारलाई विवेकशील साझा पार्टीले बनाइदियो नयाँ घर